Sawiro+Dhageyso+Akhriso Dowlada Kenya Oo Qiratay In Askar Looga Dilay Qaraxii Dhoobley. – Calamada.com
Sawiro+Dhageyso+Akhriso Dowlada Kenya Oo Qiratay In Askar Looga Dilay Qaraxii Dhoobley.
calamada May 7, 2018 3 min read
Ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan ciidamada Kuffaarta Kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xoogan oo maalintii shaley ay ciidamada Mujaahidiinta kula eegteen meel u dhow magaalada Dhoobleey ee dhacda xad-beenaadka kala qeybiya Kenya iyo Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan mujaahidiinta.
Qaraxan ayaa lala eegtay kolonyo ciidamo military ah oo ka soo ambabaxay deegaanka Libooya oo ka tirsan gobolka N.F.D ee ku hoosjira gumeysiga saliibiyiinta Kenya, waxaana uu ku soo jeeday magaalada Dhoobleey ee wilaayada Jubooyinka.
Saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa Idaacadda Islaamiga Andalus u xaqiijiyey in qaraxa lala helay gaari kuwa ciidamada daabula ka mid ah oo ay la socdeen ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan ciidamada Kuffaarta Kenya,iyagoona sheegay in qaraxa uu gabi ahaanba burburiyey gaariga ayna halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dhamaan askartii la socotay.
Dhanka kale Warbaahinada dalka Kenya ayaa qiray in ugu yaraan todobo askari oo ka tirsan ciidamada Kuffaarta Kenya lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay qaraxa maalintii shaley ka dhacay duleedka magaalada Dhoobley, iyagoona soo bandhigay muuqaalada gaariga lagu burburiyey qaraxa.
Wargeyska Standard ee laga leeyahay dalka Kenya ayaa warbixin uu maanta soo daabacay ku sheegay in gaariga la beegsaday uu dul maray miino ku aasneyd wadada, islamarkaana uu bool bool u kala faniinay.
Wargeyska ayaa sheegay in 7 ka mid ah ciidamadii la socday gaariga la qarxiyey aysan naf dhulka la gaari halka inta kalena uu soo gaaray dhaawacyo halis ah oo aad u daran.
Isagoo soo xiganaya goobjoogeyaal iyo Saraakiil military ayuu wargeyska sheegay in gaariga la beegsaday uu ka mid ahaa kolonyo ciidamo oo ku roondeynayey xad-beenaadka, balse ay la kulmeen qarax xoogan ka hor inta aysan ka soo gudbin xad-beenaadka oo aysan soo galin dhanka Soomaaliya.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu sidoo kale saameeyey gaari kale oo ka mid ahaa kolonyada kaas oo ay soo gaartay waxyeello xoogan sida ay sheegeen dad goobjoogeyaal ah.
Sawiro uu baahiyey Wargeyska Standard ayaa sidoo kale muujinayey gaariga la beegsaday oo si ba’an u burburay kuna dhacay wadada dhinaceeda.
Saraakiil ka tirsan military-ga Kenya oo gaaray halka uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay in qaraxa uu laba cad u kala jaray gaariga, waxaana la helay oo kaliya qeybta hore ee gaariga oo aad u burbursan sida ku cad muuqaalada uu baahiyey wargeyska.
Muuqaalada uu baahiyey wargeyska Standard waxaa sidoo kale ka muuqanayey askar ka tirsan military-ga Kenya oo aad u anfariisan, kana muuqdo argagax ay ka qaadeen burburka xoogan ee ka dhashay qaraxa iyo halaagga ku dhacay saaxiibadooda.
Goobjoogeyaal ayaa sidoo kale sheegay in baqtiga ciidamada gaalada Kenya oo si ba’an u go’ go’ay laga soo kala uruuriyey goobo dhowr mitir u jira halka uu qaraxu ka dhacay.
Weerarkan lagu laayey ciidamada Kuffaarta Kenya ayaa imaanaya iyadoo horaantii todobaadkan ugu yaraan 5 ruux oo gaallo Kenyaati ah lagu dilay deegaan lagu magacaabo Shimbir Faadumo oo ka tirsan gobolka Mandheera ka dib markii mujaahidiintu ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen.
Saraakiil reergalbeed ah iyo taliska Kuffaarta Afrikaanta ayaa dhawaan sheegay in weerarada qaraxyada miinooyinka ayaa noqday caqabad ugu xoogan ee ay wajahayaan ciidamada kuffaarta Afrikaanta ee duullaanka ku jooga Soomaaliya, waxaana xusid mudan in bishii la soo dhaafay xerada Xalane lagu qabtay shir socday muddo saddex maalin ah oo looga hadlayey sidii xal loogu heli lahaa weerarada qaraxyada ee Mujaahidiinta oo jaray isu socodka cadowga sidoo kalena baabi’iyey gaadiidkooda.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirada Burburka Gaariga La Qarxiyay.
Previous: Dibad Baxyo Ka Dhan Ah Dowlada Imaaraatka Oo Ka Socda Dalka Yemen.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 21-08-1439 Hijri.